Sida looga saaro muusikada iPhone-kaaga marka aad timaaddo guriga | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida looga saaro muusikada iPhone-kaaga marka aad timaaddo guriga
Sida looga saaro muusikada iPhone-kaaga marka aad timaaddo guriga
Bal qiyaas inaad guriga timaadid, oo aad muusik ku dhegaysanayso iPhone kaaga. Waxaad doonaysaa inaad ku bilowdo muusigga ku hadlaya ku-hadlayaasha gurigaaga, kaliya ma rabto dhammaan dhibka isticmaalka Xarunta Xakamaynta, ama guddida AirPlay, inaad xidhiidhinta gacanta ku samayso.
Haddii aad leedahay HomePod, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad iPhone-kaaga ku qabato meel u dhow, dib-u-ciyaartuna way wareejin doontaa. Laakiin waxa ku saabsan ku hadla AirPlay caadiga ah? Ma u gacangelin kartaa kuwaas? Haa! Waad awoodaa Habaynta degdega ah ee hal mar ah, waxaad ka heli kartaa muusiga ama abka podcast-ka ee sameecaadahaaga, oo waxaad ku ciyaari kartaa ku hadasho kasta oo AirPlay ah oo aad guriga ku leedahay.
Ku dhaaf goobta dib-u-qaadista oo leh Jid-gaabyo
Si aan u samayno sixirkan, waxaanu samayn doonaa Automation Shortcut. Kuwaani waxay ku cusub yihiin iOS 13, waxayna kuu oggolaanayaan inaad si toos ah u kiciso jid-gaabyada, iyadoo lagu salaynayo goobta, wakhtiga maalinta, iyo qaar kaloo badan. Hal doorasho ayaa ah in aad haysato shabeel-gaab marka aad guriga timaadid, laakiin waayo-aragnimadayda, iPhone-kayga waxa uu u malaynayaa in aan guriga joogo marka aan gaadho meel 300 cagood u jirta gurigayga.
Markaa, maanta waxaanu isku dayi doonaa laba kiciye oo kala duwan si aanu maqalka ugu dhiibno afhayeenka gurigaaga. Mid ayaa kiciya marka aad ku xidho shabakada Wi-Fi gurigaaga. Kiciyeyaasha kale marka aad ku dhufatid iPhone kaaga dhejiska RFID, laga yaabee inuu ku dheggan yahay gudaha albaabka, laga yaabee inuu korkiisa ku hadlo afhayeenka laftiisa.
Ku xidh sameeye marka aad guriga timaadid
Marka hore, ka fur app Shortcuts on your iPhone. Si ka duwan jid-gaabyada caadiga ah, Automation-yadu iskuma toosiyaan aaladaha dhexdooda. Taabo badhanka Automation-ka ee dhexda ku yaal, xagga hoose ee shaashadda, ka dibna taabo +. Shaashada soo socota, taabo Samee Automation Shakhsi ahaaneed.
Ku samee iswada iPhone kaaga.
Liiska, hoos u dhaadhac oo soo qaado Wi-Fi. Kadib, meesha hoos u dhacda, dooro shabakadaada Wi-Fi. Taabo Next. Sida ugu dhakhsiyaha badan ee lagu heli karo ficilka aan rabno waa inaan bilowno qorista Deji Meesha Dib U Ciyaarista sanduuqa raadinta. Markaad ku aragto natiijada, taabo, oo lasoco. Waxaad u baahan tahay inaad ka doorato afhayeenka bartilmaameedka ah ee liiska.
Deji meesha aad u ciyaareyso
Si loo dhammeeyo, taabo Next, ka dibna riix Dhammaad.
Hadda, markaad guriga ku soo noqoto, iPhone-kaagu waa inuu si toos ah ugu xidhaa af-hayeenkan, oo uu sii wado dib u ciyaarista. Way ku waydiin doontaa ka hor inta aanay sidaas samayn, markaa waxa jira hal tabo oo ku lug leh samaynta tan. Sidoo kale, laba tijaabi, waxay u muuqataa inaad dhab ahaantii u baahan doonto inaad guriga ka baxdo, ka dibna soo noqoto. Imtixaankayga, kaliya curyaaminta iyo dib-u-kicinta Wi-Fi-ga kuma filna kicinta falka.
Isticmaal istiikarada NFC si aad ugu xidhidhiyaha afhayeenka
Tani waa habka aan ugu jeclahay beddelashada, sababtoo ah waxaad samayn kartaa wakhti kasta, ma aha oo kaliya markaad timaaddo guriga. Waxay u huraysaa ku habboonaansho aad u yar, laakiin waxaad helaysaa xakameyn badan oo dheeraad ah.
IPhone-yadii dhawaa waxay akhrin karaan calaamadaha NFC, ka dibna waxay kicin karaan jid-gaaban. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad soo iibsataa sticker ku habboon, ku dheji af-hayeenka, oo samee jidka gaaban. Markaa, mar kasta oo aad rabto in aad dib-u-ciyaarista ku celiso af-hayeenkaas, kaliya ku hay iPhone-kaaga dhejiska wax yar.
Ku rux iPhone kaaga istiikarada NFC, oo ku xidh afhayeenka AirPlay.
Si aad u dejiso jidkan gaaban, kaliya samee otomaatig cusub sidaan kor ku sheegnay, laakiin dooro NFC halkii Wi-Fi kicinta. Kadib waxaad iskaan kartaa mid ka mid ah sumadaha aad dhawaan soo iibsatay, si aad ugu dhigto kiciye. Waxaad markaas bixisa summada magac, oo ku dar mid la mid ah Deji Meesha Dib U Ciyaarista fal sidii hore.
Ka dib, ku dheji dhejiska dusha ama agtiisa af-hayeenka, ama laga yaabee xitaa faanka albaabkaaga hore. Mar kasta oo aad sawirto istiikadhka, waxa ay u wareegaysaa af-hayeenka aad dooratay. Waxa aad iska sawirtaa istiikarada adiga oo ku haya qaybta sare ee iPhone-ka.
Labadan habab-gaaban/Automation-yadani waxay ku habboon yihiin sida u ruxidda iPhone-kaaga xagga sare ee HomePod, waxayna la shaqeeyaan af-hayeen kasta oo AirPlay ah oo aad yeelan karto. Isku day iyaga.
15 Olole Warbaahineed Dijital ah oo Fiican laga bilaabo 2019
Bing waxay dib u soo noolaynaysaa barnaamijkeeda lacag celinta